Ukungqubuzana Kwezintshisekelo Ukubuyekezwa Kwamafu Glyphosate - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Ukushayisana Kwezintshisekelo Ukukhathazeka Kwe-Cloud Glyphosate Review
Posted on Kwangathi 12, 2016 by UCarey Gillam
Sekuphele isikhathi esingaphezu konyaka kusukela ochwepheshe bezocwaningo ngomdlavuza be-World Health Organisation (WHO) bephakamisa ingane eyintandokazi yomkhakha wezolimo. Leli qembu, i-International Agency for Research on Cancer (IARC) limemezele ukuthi i-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni - i-glyphosate - njenge-carcinogen yabantu.
Kusukela lapho, iMonsanto Co, edonsa cishe ingxenye yesithathu yamadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi- $ 15 emalini etholwa minyaka yonke evela emikhiqizweni yokubulala ukhula eyakhiwe ngeRoundup, (futhi okunye okuningi okuvela kubuchwepheshe bezitshalo ezibekezelela i-glyphosate) bekusemkhankasweni wokuqeda Ukuthola kwe-IARC Ngombutho wamasosha ahamba ngezinyawo afaka abaphathi bemboni, ochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi nososayensi baseyunivesithi yomphakathi, inkampani icele ukukhuza umsebenzi we-IARC ku-glyphosate.
Ukuthi le mizamo izophumelela noma izophumelela kangakanani kusengumbuzo ovulekile. Kodwa ezinye izimpendulo zilindelekile kulandela umhlangano obanjwe kuleli sonto eGeneva, eSwitzerland. An “Iqembu lesayensi lamazwe omhlaba” owaziwa njenge-JMPR ubuyekeza umsebenzi we-IARC ku-glyphosate, futhi imiphumela kulindeleke ukuthi inikeze abalawuli emhlabeni jikelele umhlahlandlela wokuthi ungayibuka kanjani i-glyphosate.
Leli qembu, elaziwa ngokusemthethweni ngokuthi yi-Joint FAO-WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR), liphethwe ngokuhlanganyela yiFood and Agriculture Organisation ye-United Nations (FAO) ne-WHO. I-JMPR ihlangana njalo ukubuyekeza izinsalela nezici zokuhlaziya zemithi yokubulala izinambuzane, ukulinganisa amazinga asele asezingeni eliphakeme, nokubukeza idatha enobuthi nokulinganisa ukufakwa kwansuku zonke okwamukelekayo kubantu.
Ngemuva komhlangano waleli sonto, ozoqala ukusebenza ngoMeyi 9-13, i-JMPR kulindeleke ukuthi ikhiphe uchungechunge lwezincomo oluzobe seluya kwiKhomishini ye-FAO / WHO Codex Alimentarius Commission. I-Codex Alimentarius yasungulwa yi-FAO kanti i-World Health Organisation yathuthukisa amazinga okudla ahambisanayo emhlabeni wonke njengendlela yokuvikela impilo yabathengi kanye nokukhuthaza izindlela ezifanele zokuhweba ngokudla.
Umhlangano kuza njengoba bobabili abalawuli baseYurophu nabaseMelika belwa nokuhlolwa kwabo nokuthi bangasabela kanjani ekuhlukanisweni kwe-IARC. Kubuye futhi njengoba iMonsanto ifuna ukuxhaswa ngezimangalo zayo zokuphepha kwe-glyphosate.
IGlyphosate akuyona nje i-lynchpin yokuthengiswa kwemithi yokubulala ukhula yenkampani kepha futhi nembewu yayo eguqulwe ngokwezakhi zofuzo eyenzelwe ukubekezelela ukufuthwa nge-glyphosate. Le nkampani nayo okwamanje iyazivikela amacala ambalwa lapho abasebenzi basepulazini nabanye bathi bathola umdlavuza oxhumene ne-glyphosate nokuthi iMonsanto ibizazi izingozi, kepha izifihlile. Futhi, ukusolwa kokwahlukaniswa kwe-glyphosate kwe-IARC kungasiza inkampani ecaleni layo elimele izwe laseCalifornia, okuhlose ukumisa umbuso ekulandeleni ukuhlukaniswa kwe-IARC ngesiqu esifanayo.
Ngokuya ngomphumela we-JMPR, iCodex izothatha isinqumo nganoma iziphi izinyathelo ezidingekayo mayelana ne-glyphosate, kusho okhulumela i-WHO uTarik Jasarevic.
"Kungumsebenzi we-JMPR ukwenza ukuhlolwa kobungozi bokusetshenziswa kwezolimo nokuhlola ubungozi bezempilo kubathengi kusuka ezinsaleleni ezitholakala ekudleni," kusho uJasarevic
Umphumela womhlangano we-JMPR ubhekwe ngeso lokhozi amaqembu amaningi ezemvelo nabathengi afuna ukubona amazinga amasha okuphepha we-glyphosate. Futhi hhayi ngaphandle kokukhathazeka okuthile. Lo mfelandawonye, ​​ofaka phakathi uMkhandlu Wezokuvikelwa Kwemithombo Yemvelo kanye Nabangane Bomhlaba, uzwakalise ukukhathazeka ngokusobala okubonakala kungqubuzana kwezintshisekelo kuthimba labeluleki lochwepheshe. Abanye abantu babonakala benobudlelwano bezezimali nobungcweti eMonsanto nakwimboni yamakhemikhali, ngokusho komfelandawonye.
Umfelandawonye icacise ngokukhethekile izibopho zamalungu ezingenzi-nzuzo I-International Life Sciences Institute (ILSI), exhaswa yiMonsanto nezinye izinkampani zamakhemikhali, zokudla nezidakamizwa. Isikhungo ibhodi labaphatheli kufaka phakathi abaphathi abavela eMonsanto, Syngenta, DuPont, Nestle nabanye, kanti uhlu lwayo lwamalungu nezinkampani ezisekelayo lubandakanya lezo nezinye eziningi ukukhathazeka kokudla nokwamakhemikhali komhlaba.
Imibhalo yangaphakathi ye-ILSI, etholwe isicelo samarekhodi womphakathi, iphakamisa ukuthi i-ILSI ixhaswe ngomusa yimboni yezolimo. Idokhumenti eyodwa ebonakala sengathi iluhlu olukhulu lwabanikeli be-ILSI luka-2012 ikhombisa ukunikelwa okuphelele kwe- $ 2.4 million, ngemali engaphezulu kwama- $ 500,000 lilinye kusuka kwaCropLife International naseMonsanto.
"Sinokukhathazeka okukhulu ngokuthi ikomidi lizothonywa ngokungafanele yimboni yonke yezibulala-zinambuzane futhi ikakhulukazi iMonsanto - umkhiqizi omkhulu we-glyphosate emhlabeni," kusho umfelandawonye encwadini ye-WHO ngonyaka odlule.
Omunye wochwepheshe be-JMPR ngu-Alan Boobis, uprofesa we-biochemical pharmacology kanye nomqondisi weyunithi yezobuthi emkhakheni wezokwelapha e-Imperial College London. Uyilungu futhi engusihlalo odlule webhodi labaphatheli be-ILSI, iphini likamongameli we-ILSI Europe nosihlalo we-ILSI.
Elinye ilungu ngu-Angelo Moretto, uMqondisi we-International Center for Pesticides and Health Risks Prevention e "Luigi Sacco" Hospital ye-ASST Fatebenefratelli Sacco, eMilan, e-Italy. Umfelandawonye uthe uMoretto ubambe iqhaza kumaphrojekthi ahlukahlukene ne-ILSI futhi usebenze njengelungu lethimba elihola iphrojekthi ye-ILSI ebungozini bokuchayeka kwamakhemikhali okuxhaswe yizinkampani zezolimo ezibandakanya iMonsanto.
Omunye ngu-Aldert Piersma, usosayensi omkhulu e-National Institute for Public Health and the Environment eNetherlands kanye nomeluleki wemiklamo ye Isikhungo Sezesayensi Yezempilo Nezemvelo se-ILSI.
Kukho konke uhlu lwe-JMPR lochwepheshe lufinyelela ku-18. UJasarevic uthe uhlu lochwepheshe lukhethwa eqenjini labantu abazwakalise intshisekelo yokubandakanyeka, futhi bonke "bazimele futhi bakhethwa ngokususelwa ebuhleni babo besayensi, kanye nangolwazi lwabo emkhakheni wokuhlola ubungozi bezibulala-zinambuzane."
U-Aaron Blair, ongusosayensi osekhulile eNational Cancer Institute futhi ongusihlalo weqembu le-IARC elenza ukuhlukaniswa kwe-glyphosate, uvikele umsebenzi we-IARC ngokusekelwe ekubuyekezweni okuphelele kwesayensi. Uthe akanazinkinga angadingida ngazo maqondana nokubuyekezwa kwe-JMPR komsebenzi we-IARC.
"Nginesiqiniseko sokuthi ukuhlolwa kweqembu elihlangene le-FAO / WHO kuzokwenza izizathu zokuhlolwa kwazo zicace, nokuyinto ebaluleke kakhulu kwabezindaba nasemphakathini," esho.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane U-Alan Boobis, U-Aldert Piersma, Angelo Moretto, ICropLife International, Dupont, Ukudla, ILSI, I-Imperial College yaseLondon, Isikhungo Samazwe Ngamazwe Sokuvikela Imithi Yokubulala Izilokazane kanye Nezingozi Zempilo, I-International Life Sciences Institute, Monsanto, I-Nestle, INetherlands National Institute Yezempilo Yomphakathi kanye Nezemvelo, izibulala-zinambuzane, umthethonqubo, Syngenta
ICoronavirus Food News Tracker: Izindatshana ezihamba phambili ngobhadane nohlelo lwethu lokudla